“မညှင်းစကောင်း ညှင်းစကောင်း “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » “မညှင်းစကောင်း ညှင်းစကောင်း “	10
“မညှင်းစကောင်း ညှင်းစကောင်း “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jun 21, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 10 comments
တောင်တွေးမြောက်တွေး အပိုင်းအစလေးများ (၄)
ဒီနေ့ဖေစ်ဘုတ်မှာ ကျနော်အကိုကြီးလိုနေတဲ့ R.c Win Oo က သူငယ်ငယ်က
ဒီတော့လဲအကိုကြီး ကျနော်လဲရေးအုံးမယ်ဆိုတော့ သူကလဲရေးပါလို့အားပေးတော့
ကျနော်တို့ ကုန်သည်ထဲမှာဟိန္ဒူလူမျိုး ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။
သူ့ဆီကရစရာရှိတဲ့ငွေကို ကျနော်တို့က သူ့ ဆိုင်မှာသွားမကောက်ရပါဘူး။
သူက သူ့ဆိုင်ပိတ်မှလာပေးတော့ မိုးချုပ်တာပေါ့။
တစ်ရက်တော့ သူငွေလာပေးတဲ့အချိန် ကျနော်တို့ကပြောတာပေါ့။
“ကျနော်တို့က နေ့တိုင်း ငွေခံထွက်တာ၊
ဦးလေး လာမပေးနဲ့ ကျနော်တို့ ဆိုင်လာပြီးယူပေးမယ်လေ”လို့ပြောတော့
“ရတယ် မလာနဲ့ ချွန်ဒေါ် အခုလိုဘဲလာပေးပါမယ်”လို့
နောက်တစ်ခါ ငွေလာသွင်းတော့ “ကျနော်တို့ ဆိုင်လာယူပေးရင်ရတယ်
ဦးလေးလဲ မပင်ပန်းတော့ ဘူး”လို့ထပ်ပြောကြည့်ပါတယ်။
သူကလဲ အရင်လိုဘဲ “ချွန်ဒေါ်လာပေးမယ်”လို့ဘဲပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့က ကျနော်တို့ကို သူ့ခံစားချက်တွေပြောပြသွားပါတယ်။
“ခင်ဗျားတို့ ချွန်ဒေါ်လာတဲ့အချိန်ထိ မိုးချုပ်အောင်စောင့်ရတာ
သူ့တို့ကတော့ မိသားစု စကားလေး ပြောလိုက် ထမင်းစားလိုက်
ချွန်ဒေါ်တို့ သားအဖမှာတော့ ခြင်က ကိုက် ဘိုက်ကဆာ ညောင်းကလဲ ညောင်း ပေါ့။
အဲ့တော့ ချွန်ဒေါ်တို့ ဘ၀ကအတော်ကို အောက်ကျ နောက်ကျ နိုင်လှပါလားလို့
တစ်ချို့အိမ်ကျပြန်တော့လဲ ပိုက်ဆံမစစ်ရသေး ဘူး ထိုင်အုံးဆိုစောင့်ခိုင်း။
ပိုက်ဆံပေးတဲ့အခါကျတော့ အရွက်ကြီးတွေ အကောင်းတွေသိမ်းထားပြီး
ချွန်ဒေါ်တို့မှာက နောက်ထပ် ငွေခံသွားစရာအိမ်တွေရှိသေးတော့
အဲလိုကြုံပါများတော့ ချွန်ဒေါ် အသက်ကြီးလာလို့အလုပ်လုပ်ရင်
နောက်ပြီးပိုက်ဆံကို လည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် စီထားပြီး မှပေးမယ်
လို့ ဆုံးဖြတ်ထားလို့ အခုလို လာပေးတာပါ၊
ပိုက်ဆံတွေကို သေချာ စစ် ပြီး စီနေတာရယ်
စက်ဘီး နဲ့လာရတယ် ဆိုတော့ နည်းနည်းမိုးချုပ်တာတော့
စိတ်မရှိပါနဲ့” လို့ပြောပြတော့ မှ ကျနော်တို့ သူ့ အပေါ်မှာ
ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်လဲ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ငွေခံသွားနေရသူတွေ
အဲတော့ လဲ ကိုယ်အကြွေးပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုနေ့စဉ်ငွေကောက်တဲ့
နောက်ပြီး အကြွေးဆပ်တဲ့အခါကျတော့လည်း ယူထားတဲ့စာရင်းတစ်စာရင်း
ဒါကတော့ နေ့စဉ်လုပ်နေကျ သမားရိုးကျ အလုပ်ဆိုတော့ သိပ်အဆန်းတကျယ်
အဲလို ငွေခံရင်းသိလာတာကတော့ ပိုက်ဆံရှိတယ်ဆိုတဲ့ သူဌေးဘွဲ့ခံထားတဲ့
လူများ က ပိုတွက်ကပ်တယ်ဆိုတာလေးပါဘဲ။
အားလုံးလို့တော့ သိမ်းကြုံးပြီး မဆိုလိုချင်ပေမယ့်
ကျွန်တော် တို့ ကောက်ပဲသီးနှံတွေရောင်းတုံးက သွားပြီးငွေခံရတဲ့
ချမ်းသာတာကတော့ ကျိကျိတက် ငွေပေးရင်တော့ လက်ခက်။
မြန်မြန်ရ ချင်ရင် စောစောသွားပြီး ဘောက်ချာထပ်ပေါ့။
အဲ့ခေတ်က ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ဆိုတော့ သမ၀ါယမဆိုင်က
ပစ္စည်းထုတ်သလို လူတွေ မတ်တပ်ရပ်ပြီး တန်းမစီရရုံတမယ်ပါဘဲ။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ သူဌေးက ရုံးခန်းထဲမှာမရှိတာများပါတယ်။
သူ့စာရေးမက သူဌေးဆီ ယူသွားပြီးပြပါတယ်။
သူဌေး ကတစ်စောင်ချင်းကြည့်ပြီး ဘယ်သူ့ ပေးမယ် မပေးဘူးဆိုပြီး
မပေးဘူးဆိုတဲ့သူက ဘောက်ချာလေးကိုင်ပြီး ပြန်ပေါ့။
ရမယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့ဘောက်ချာကို သူ့စာရေးမက လက်ခံတွေနဲ့
ကျသင့်ငွေကို သူက တစ်ခါပြန်တွက်။
ပြီးပြီဆိုမှ မီးခံသေတ္တာထဲက ပိုက်ဆံထုတ်
သူသေချာပြီဆိုမှ စာရေးမကိုခေါ်ပြီး ပိုက်ဆံပေးခိုင်းပါတယ်။
ရှေ့ရောက်တော့ စာရေးမက တစ်ခါ ပြန်ပြီး သူ့ သူဌေးစစ်သလို ထပ်စစ်ပြန်ပါတယ်။
သူ့ အိမ်မှာငွေခံရင် အနည်းဆုံး နှစ်နာရီလောက်တော့ အချိန်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
ဒါတောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးမှ ငွေ မလောက်လို့ ဆိုပြီးပြန်လွှတ်တာမျုိးလဲရှိပါသေးတယ်။
“ယူတော့ ပြုံးပြုံးတောင်းတော့မုန်း မတောင်းပြန်တော့ဆုံး”ဆိုတာ
ကျနော်တို့ အလုပ်လုပ်ရတာ ဟိုးရှေးကတည်းက အခုထိ အကြွေးစံနစ်နဲ့ဘဲ
တစ်ခါတစ်လေတော့ လဲ ဒီအကြွေးကောက်ရ ငွေခံရတဲ့အလုပ်ကြီးကိုစိတ်ကုန်မိတာအမှန်ပါဘဲ။
ကိုယ်ယူထားတဲ့ငွေ ကိုယ်ပြန်ပေးရတာကို ဘာကြောင့်များ
သူများပေါ်ညှင်းဆဲချင်တဲ့ စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့မရနို်င်အောင်ပါဘဲ။
ကောင်းတဲ့သူနဲ့လဲတွေ့ရ ဆိုးတဲ့သူနဲ့လဲတွေ့ရ အမျိုးမျိုးပါဘဲ။
အရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်းမှာ ကြွေးစနစ် ကတော့ ရှောင်မရ ရှိတာပါဘဲ။
သူများတွေ ဆီမှာတော့ ဒီနေ့ခေတ် နည်းပညာရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ ကြွေးတောင်းဒုက္ခ အတော်လေး သက်သာသွားပြီ။
ဘောက်ချာတွေမှာ အကြွေးပေးချိန် (ဥပမာ) နှစ်ပါတ် (ဒါမဟုတ်) တစ်လ တစ်ခါထဲပါပြီး။
အချိန်ရောက်ရင် ငွေလွှဲဖို့ ဘဏ်နံပါတ် ပါတာမို့ ကွန်ပျူတာသုံးပြီး ဘဏ်ကို အွန်လိုင်း လွှဲနိုင်တယ်။
သတ်မှတ်ချိန် ကျော်ပြီးမှ ပေးရင် တစ်ချို့က ဒါဏ်ကြေး သတ်မှတ်တယ်။
ဒါဏ်မတပ်ခင် အီးမေး နဲ့ သတိပေးစာပို့တယ်။
လူကိုယ်တိုင် သွားလာ နေစရာ ကို မလိုတော့ဘူး။
. မြန်မာပြည်မှာလဲ ဖြစ်သင့်တာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက် ကထဲ ကပါဘဲ။
ဒီ အစိုးရေ-ာက်သုံးမကျ လွန်းလို့ ဘာမှ ကို လုပ်လို့ မရ ဖြစ်နေခဲ့တာ။
တကယ်တော့ နည်းပညာသိသူ တွေ၊ စနစ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သူ တွေ နိုင်ငံထဲ အများကြီးပါ။
. နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ က အစိုးရ မပံ့ပိုး လို့ မရဘူး။
အဲဒါကို ဂရုမစိုက်ဘဲ သူတို့ စားဖို့ ချည်း လုပ်နေခဲ့တော့ ဘာဆိုဘာမှ ဖြစ်မလာဘဲ ဘိုးတော်ဘုရားခေတ် ကကို မတက်နိုင်တော့ဘူး။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုလတ်ကြီး
Mike says: .စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲကကြွေးစံနစ် အကြောင်းတော့ မဝေဖန်တတ်ဘူးကိုပေါက်ရေ
.ကျုပ်ငယ်ငယ်ကတော့ အဖေခိုင်းလို့ သူများအိမ်ငွေသွားချေးရတာခဏခဏ
.မျက်နှာငယ်ရချက်တော့မပြောပါနဲ့ဗျာ…ဒါကြောင် ကိုယ့်အလှည့် .ကျရင်သူများဆီကမချေးရမငှားရအောင်နေမယ်ဆိုပြီးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်
.ကိုယ့်ဆီကလည်းဖြစ်နိုင်သမျှမချေးချင်ဘူး…မေတ္တာပျက်ရလွန်းလို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11640
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုမိုက်ရေ
Ma Ma says: ကြွေးစနစ်အကြောင်းပြောရရင် ခေတ်စနစ်အကြောင်းလည်း ပါလာတော့မယ်။
ခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ လုပ်ငန်းတွေမှာ ကြွေးဆုံးတာတွေ ပိုများလာတယ်လို့ ထင်မိတယ်။
ငွေကို သိန်းရာနဲ့ချီ ထောင်နဲ့ချီပြီး မပေးကြလဲ ဘာမှလုပ်မရတာလား၊ မလုပ်ကြတာလား မသိဘူး။
အဲဒီလိုနဲ့ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ……
အလွယ်တကူပဲ မပေးပဲ နေကြ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11640
ဥပဒေ လက်တံ ပုံစံ မမှန်တော့
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဟုတ်ပါတယ်။ ဥပဒေ မပြည့်စုံတာ က ဒုက္ခပေးနေတာ။ ပြီးတော့ ငွေချေးပါ ဆိုတဲ့စကားက တကယ်တော့ ငွေပေးပါ။ ပြန်မဆပ်ဘူး လို့ ဆိုလိုတာ။ အဲဒါကို သဘောမပေါက်လို့ ခံခဲ့ရဖူးတယ်။ စီးပွားရေး နားမလည်လို့ ကြွေးစနစ်အကြောင်းတော့ သိဘူး။ သေချာတာက ငွေချေးတယ် ဆိုတာ တကယ်တော့ အလကားပေးပါ လို့ ဆိုလိုတာ။ ဟိုက ပြန်မပေးလို့ ခံရရင် ညည်းက တစ်ခါသေဖူး ပျဉ်ဘိုးနားလည်ပေါ့အေ လို့ အပြောခံရပါမယ်။
ဥပဒေ ကြောင်းအရ စကားပြောမယ်ဆိုရင်
စွဲပြန်ရင်လဲ လက်ဘက်ထုပ် ကရှိသေးတယ်
Alinsett @ Maung Thura says: တခုခု ယူပြီးရင်… ယူတာနဲ့ တန်အောင် ပြန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အသိတော့…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အဲဒါ က လောကနိယာ မပါ ဘဲ အလင်းဆက်
ဒါပေမယ့် အချို့ကယူသာ ယူလိုက်တယ် ပြန်မပေးချင်ကြတော့ ဘူး လေ